CAD: Dib u soo dir, u soo qaado - Geofumadas
Markaad haysato walxo qumman oo aan lahayn dhumuc ama buuxin, taasi uma muuqato mid muhiim ah, laakiin dhaqso ama ka dib waa wax awood ah, inkastoo layers (heerarka) waa inay ahaadaan xigmad.
Waxay dhacdaa inaan heysto hantidan, oo markaad buuxiso daboolo waxa ka dambeeya qoraalka. In Corel Dcayriin aad u fudud, waxaad isticmaali jirtay kaliya isku-dar ah ctrl, wareeg con bogto ama duugo; Hubaal waxaa jira siyaabo kale oo lagu sameeyn karo CAD, aan aragno sida aan u sameeyey:
1 Iyadoo Microstation V8
Sheyada ayaa la doortaa
Soo qaado hore
2 Iyadoo Microstation V8i waxa ay si siman u xaddidan tahay, iyada oo faa'iido leh in daahfurnaan lagu dabaqi karo sifooyinka guud ee alaabta.
2 Iyadoo AutoCAD ka hor 2009
Shayga ayaa la xushay
Soo qaado horay, ama u soo dir.
Haddii hantida badhanka saxda ah ee la bedelay, ma noqon doonto suurtagal. Waxay kaloo la shaqaysaa Qalab> Amar bandhig... haddii aad hesho Tools.
3 Iyadoo AutoCAD ka dib 2009
Isku mid ah sida kuwii hore, laakiin halkii ay ka odhan lahaayeen Muuqaal bandhig waxay u muuqataa sida Sameey nidaamka.
4. Iyadoo AutoCAD la soo dhaafay.
Waxaad taabanaysaa sheyga, iyo miiska amariga ah waxaad ku qoreysaa DRAWORDER
Kadib sameynta ENTER, fursadaha dano gaar ah loo xushay: Hore, Dib u, Qodob, Xagga hoose.
Post Previous«Previous Haddii ay ahayd ...
Post Next Abuuri khadadka fiilooyinka leh ArcGISNext »
5 Jawaab in "CAD: Dib u soo dir, soo qaad"
ZOSK isagu wuxuu leeyahay:
WAXA LAGU QAADAY CODSIGA LACAG LA'AAN AH IYO BADBAADADA AHI> Amar bandhig
> Soo qaado horay
> dib u dir.
urbano isagu wuxuu leeyahay:
JAZMIN SHAMIRA isagu wuxuu leeyahay:
HELLO ILAALINTA UGU HORREEYA LOOGU TALAGALAY CIQAABTA FOOMKA QAADIDA
Waxtarka aadka u fiican, waxaan tijaabin doonaa sida ay u shaqeyso inta u dhexeysa shayada heerarka kala duwan.
MicroStation v8i waxaa jira aalad loogu talagalay sawirada 2D «Mudnaanta Mudnaanta Firfircoon», waxay aasaastaa mudnaanta aaladda firfircoon, taasoo go'aamineysa sida sheyga loo muujiyo iyadoo la tixgelinayo qaybaha kale.
Waxyaabaha leh qiimaha mudnaanta ugu sarreeya ayaa lagu muujiyay dhinaca hore, halka alaabta leh qiimaha mudnaanta ugu hooseeya lagu muujiyay dhabarka. Qiyamka mudnaanta waxay ku kala duwanaan karaan -500 ilaa 500.